Raad Raac News Online – (Dhageyso) Siyaasiyiin reer Puntland ah oo Taageeray shirka Isimada Iyo Beesha Tanade uga soconaya Garowe.
(Dhageyso) Siyaasiyiin reer Puntland ah oo Taageeray shirka Isimada Iyo Beesha Tanade uga soconaya Garowe.
Moos Bukeeni July 30, 2017 Comments Off on (Dhageyso) Siyaasiyiin reer Puntland ah oo Taageeray shirka Isimada Iyo Beesha Tanade uga soconaya Garowe.
Iyadoo Magaaladda Garowe ee Xarunta Dowladda Puntland ay taalo Gogol ay dhigeen Odayaasha dhaqanka Waxgaradka Cuqaasha iyo Siyaasiyiinta Beesha Tanade ayaa hadana shirkaasi siyaabo kale duwan loo taageerayaa.
Taageeraddii ugu dambeysay ee qabsoomida shirkaas waxaa muujiyay Siyaasi Maxamed Xaaji Aadan oo hore Xilal Wasiir Sarkaal Ciidan iyo Lataliye Madaxweyne ka soonoqday Puntland iyo Somalia.
Siyaasi Maxamed Xaaji Aadan ayaa warbaahinta kula hadlay Garowe waxaana uu sheegay in xiligan ujeedka shirka beesha tanade iyo Isimada uu yahay mid lagu muujinayo cabasho dhanka Golaha Wakiiladda ah.
Sidoo kale Siyaasigan waxaa uu sheegay in Madaxda xiligan ee Puntland ay u ogolaadeen beesha Tanade in ay shirkan qabsadaan Cabashadoodana ku muujiyaan habka saami qeybsiga golaha Wakiiladda.
Waxaa uu sheegay in Madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ay u ogolaadeen in loo kordhiyo tirade xubnaha ay ku doonayaan in ay kaga soo dhex muuqdaan mudanayaasha golaha wakiiladda Puntland.
Ugu dambeyn waxaa uu sheegay inuu aad uga xun yahay hadal dhawaan uu jeediyay Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole kaasi oo sheegay in aan la furi Karin lana kordhin Karin xubnaha golaha wakiiladda oo xiligan 66 xubnood ka kooban.
Hadalkan siyaasi Maxamed Xaaji Aadan ayaa ku soo beegmaya iyaddoo uu weli soconayo shirkii Isimada dhaqanka iyo Odayaasha Beesha Tanade kuwaasi oo dhawaan la filayo in shirkooda la soo gaba gabeeyo qodobo Muhiim ahna ay ka soo bixi doonan sida la filayo.
Halkan hoose ka dhageyso Codka Siyasiga.